About BiasLighting.com uye Iyo MediaLight - MediaLight Bias Mwenje
About BiasLighting.com uye Iyo MediaLight
BiasLighting.com chikamu che Scenic Labs, LLC.
Yese zviyero sangano rinokurudzira kurerekedza mwenje kuti ive nemufananidzo chaiwo uye takaona kuti paive nemukana wekubvisa nyonganiso mumusika nekugadzira yakanyatsoita 6500K yekutsvetera magetsi mhinduro.
Kunyange isu takatarisa kwekutanga vaive vanofarira dzimba dzemitambo, yedu MediaLight Bias Lighting System yakaratidza kunyanyo kufarirwa nevanyanzvi vemakororita uye vapepeti. Uye nepo vachiona kuri kutenda, ivowo vane chishandiso chekusimbisa zvido zvedu.
BiasLighting.com inogona kusvikwa nenzira dzinotevera:
UK: + 44 20 7193 7351
Nekudaro, ndapota taura nesu kuburikidza neemail kana taura nezvechigadzirwa kubvunza. Tine ruzivo rwakawanda rwatinoda kugovera pane saiti, uye hazvisi nyore kwazvo kugovana iyi info kuburikidza nefoni. Kana tisingakwanise kupindura mubvunzo wako kuburikidza nehurukuro kana email, tinofara kuchinjira kufoni, asi hatitore maodha efoni Kana ichi chisiri kubvunza kwechigadzirwa, tinofara kutaura pafoni, asi ngatirongerei kufona kuburikidza neemail. Nekuda kwenhamba huru ye spam yekufona yatinogashira, ma ringer edu haawanzo kuvhurwa, kunyanya mushure meawa 9-5 ebhizinesi maawa.
Yedu snail kero kero yekudzoka uye garandi zvirevo
2 Kiel Ave # 133